Tottenham oo taariikh sameeysay iyo macalinkooda oo amaan ugu qubeeye xiddigaha kooxdiisa – Somali Sounds
Tottenham oo taariikh sameeysay iyo macalinkooda oo amaan ugu qubeeye xiddigaha kooxdiisa. Macalinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay, kaddib markii ay kaga soo gudbeen Manchester City wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League. Kooxda Manchester City ayaa si fool xuma ah kaga hartay tartanka Champions League wallow ay ku adkaadeen kulnkan 4-3, hadana Tottenham ayaa ku soo baxday goolal badsi oo kulamada banaanka ah waxayna wadarta natiijada labada kulan ay noqotay 4-4. Hadaba Mauricio Pochettino ayaa ciyaarta kadib si weyn ugu amaanay ciyaartoyda kooxdiisa Tottenham shaqadii adkeyd ay kulankan ka qabteen wuxuuna yiri: “Ciyaartoyda kooxdeyda waa geesiyaasha maanta, aad ayaan ugu faraxsanahay taageereyaasheena garab istaagooda inta ay ciyaarta socotay, waana sababta aan u jeclahay kubadda cagta”.
April 10, 2019 April 10, 2019 Somali Sounds.com
Taliyaha Ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay Banaanbaxa Mogadishu halkaan ka Daawo